One change international NGOs desperately need to make ("နိုင်ငံတကာအန်ဂျီအိုအဖွဲ့အစည်းများအလွန်
Why international organisations should pay compensation when they recruit the experienced staff of local groups?
Before Messi joined Barcelona, or Ronaldo joined Manchester United, they played for local clubs. They spent years crafting their game and receiving coaching from these local clubs. When eventually they got recruited to play for Man U or Barcelona, the local clubs received payments to recognise all the investment that they had made in them. They couldn’t have been the players they were without those clubs.
It does seem strange then that this notion of fairness in the way players transfer between big and small clubs is not translated into the aid sector. Inafantastic blog from Kate Sutton from Humanitarian Advisory Group she wonders why local organisations are not given any form of support or compensation when large international NGOs recruit experienced staff from them.
Of course NGOs are not quite the same as football clubs. ManU isaprofoundly better football team than the local club I used to play with in Yangon. But it is not the same for international and local NGOs.
Yes, Oxfam and CARE are richer and have better fundraising opportunities than many local Myanmar NGOs but it is not at all clear that they are better than local groups in thinking about or implementing development projects. And in practice international and local NGOs often work together.
But it is important for us to ask why the common-sense fairness applied in the world of football – between big, rich clubs and smaller ones - is not applied to aid organisations? If, for example, Oxfam in Myanmar recruits an experienced member ofalocal organisation, why could they not pay the equivalent of three months of salary to that local organisation?
The local organisation may have invested years in developing the skills of that staff member, and they are the very skills that the international organisation will draw on. While this cannot fully compensate the loss that local groups experience when there staff move to other higher paid positions, it could at least provide them withasmall amount of core funding to manage the transition.
Staff members of local organisations have every right to move on and seek new jobs where they may be challenged in different ways and perhaps earnahigher salary. I don’t think anyone would suggest that staff shouldn’t be free to move.
But as this movement happens it is also reasonable to expect that local organisations will be treated fairly and not have their capacity undermined.
And this principle is catching on internationally.
The international Charter4Change outlines eight points for the localisation of humanitarian aid, one of which is ‘Stop Undermining Local Capacity’. It affirms this idea of compensation for local organisations, especially in disaster settings where this problem of staff movement is most acute.
Perhaps the progressive signatories of the Charter4Change, such as Oxfam and CARE, could lead the way in Myanmar in committing toanew system of compensation for local groups?
This would be hard for them, and would mean they would have to adjust budgets. Butagenuine commitment to fairness will require sacrifices from international organisations.
PK Forum note: Charter for Change signatories are committed to “Stop undermining local capacity: We will identify and implement fair compensation for local organisations for the loss of skilled staff if and when we contractalocal organisation’s staff involved in humanitarian action within6months of the start ofahumanitarian crisis or duringaprotracted crisis, for example along the lines of payingarecruitment fee of 10% of the first six months’ salary.” *****************************
'နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများထံမှ အတွေ့အကြုံရှိသောဝန်ထမ်းများကို ခန့်မည်ဆိုပါကအဘယ်ကြောင့် လျော်ကြေးငွေပေးသင့်သနည်း?'
ဘာစီလိုနာအသင်းသို့ မက်စီမပြောင်းရွှေ့မှီ သို့မဟုတ် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းသို့ ရိုနာဒိုမပြောင်းရွှေ့ခင်က ၎င်းတို့သည် ဒေသအသင်းများတွင် အသီးသီးကစားနေခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဘောလုံးကို ပရိယာယ်ကြွယ်ဝစွာကစားနိုင်ရန် သင်ကြားမှုကို ထိုဒေသခံအသင်းများမှပင် သင်ကြားမှုစတင်ရရှိခဲ့ကျပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ၄င်းတို့အား မန်ယူ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့မှ ခေါ်ယူကစားသောအခါ ဒေသအသင်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ထည့်ဝင်ခဲ့သောအရင်းအနှီးအားလုံးအတွက် လျော်ကြေးငွေပေးအပ်ခြင်းရခဲ့သည်။ မက်စီ၊ ရိုနာဒိုတို့အနေဖြင့် လက်ရှိရောက်နေသော ကစားသမားများဘဝသို့ ထိုဒေသအသင်းများမရှိပဲ ဖြစ်လာခဲ့မည်မဟုတ်ပါ။
ထိုကဲ့သို့ ဘောလုံးအသင်းငယ်မှအသင်းကြီးသို့ အားကစားသမားများပြောင်းရွှေ့ရတွင် မျှတမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်သောအလေ့အထသည် ကူညီထောက်ပံ့မှု (aid) ကဏ္ဍတွင် အသုံးချခြင်းမရှိသည်မှာ ထူးဆန်းနေပါသည်။ လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုအကြံပေးအဖွဲ့မှ ကိတ်စတ်တန်ရေးခဲ့သည့် အလွန်ကောင်းမွန်သည့်ဆောင်းပါးတွင် ၄င်းအနေဖြင့် အဘယ်ကြောင့် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၄င်းတို့ထံမှဝန်ထမ်းများကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါ်ယူခန့်ထားလျင် မည်သည့် အထောက်အပံ့ သို့မဟုတ် လျော်ကြေးမရသည့်အချက်မှာ စဉ်းစားဖြစ်သည်ဟုရေးထားပါသည်။
သို့သော်လည်း အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်း (NGO) များသည် ဘောလုံးအသင်းများနှင့်တော့ မတူနိုင်ပါ။ ကျွန်တော်ရန်ကုန်တွင်ကစားခဲ့ဘူးသည့် ဒေသခံအသင်းထက်တော့ မန်ယူသည် အလွန်အမင်း ပိုကောင်းသည့်ဘောလုံးအသင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် လည်း ထိုအချက်သည် နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းရှိအစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်း (NGO) များအတွက် အတူတူယူဆ၍ မရနိုင်ပါ။
Oxfam နှင့် CARE သည် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများထက် ရန်ပုံငွေတောင့်တင်းမည်ဖြစ်ကာ ရန်ပုံငွေပိုရှာနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းလည်းရှိပါမည်။ သို့သော် ၄င်းတို့အနေဖြင့် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများထက် ဖွံ့ ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ပုံဖော်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း ပိုသာလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟု ကောက်ချက်ရှင်းလင်းစွာမချနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်ကူညီထောက်ပံ့မှုပေးသည့်ကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများသည် အတူယှဉ်တွဲအလုပ်လုပ်နေကျပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ဘာကြောင့် ဘောလုံးလောကရှိ ချမ်းသာ၍ ကြီးမားသောအသင်းနှင့် သေးငယ်သောအသင်းများကြား သမာရိုးကျဖြစ်နေသည့် တရားမျှတမှုသည် အဘယ်ကြောင့်ကူညီထောက်ပံ့မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် မကျင့်သုံးနေဖြစ်သလဲဟူသည့် မေးခွန်းကို မေးနေရမည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ Oxfam အနေဖြင့် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းထံမှ အတွေ့အကြုံရှိသော ၀န်ထမ်း အားခေါ်ယူမည်ဆိုပါက အဘယ်ကြောင့် ၄င်းတို့အနေဖြင့် ထိုဝန်ထမ်းမှရရှိမည့် ၃လစာနှင့်ညီမျှသည့် ပမာဏကို ၄င်းဒေသခံအဖွဲ့အစည်းအားလျော်ကြေးအနေဖြင့် မပေးသင့်ပါသနည်း? ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိုဝန်ထမ်းစွမ်းရည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ရပေလိမ့်မည်။ ထိုစွမ်းရည်များကိုပင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းမှ တန်ဖိုးထားကာ အသုံးပြုသွားပါလိမ့်မည်။
ထို့ကဲ့သို့ ၄င်းတို့၏၀န်ထမ်းမှ လစာပိုမြင့်သောနေရာသို့ ရွှေ့သွား၍ ဒေသအဖွဲ့အစည်းမှ ဆုံးရှုံးမှုကို အပြည့်အ၀ကုစားနိုင်မည် မဟုတ်သော်လည်း အနည်းဆုံးတော့ အဖွဲ့မှ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် ရံပုံငွေ (သို့) ပမာဏအနည်းငယ်ထည့်ဝင်ခြင်းဖြင့် ထိုအရွှေ့အပြာင်းကာလကို ပို၍ချောမွေ့စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ဒေသအဖွဲ့အစည်းမှ ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် မတူညီသည့်စိတ်ခေါ်မှုရရှိနိုင်ကာ လစာလည်း ပိုမြင့်မည့် နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် အခွင့်အရေးအပြည်အ၀ရှိပါသည်။ မည်သူမှ ၀န်ထမ်းများအား လွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းခွင့်မရှိဟူ၍ ပြောမည်မဟုတ်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။
သို့သော် ထိုသို့ ရွှေ့ပြောင်းမှုပြုလုပ်သည့်အခါတွင် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မျှတစွာဆက်ဆံခံရကာ ၄င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် မျှော်လင့်သည်မှာ မျှတသည်ဟု မြင်ပါသည်။
ယခုတင်ပြသွားသောမူသည် နိုင်ငံတကာတွင်လည်း စတင်ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်သည်။
Charter4Change တွင်အချက် ၈ချက်ပါဝင်ပြီး လူသားခြင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးခြင်းအား ဒေသနှင့်ဆီလျော်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ချက်မှာ ဒေသတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်နိုင် မည့်လုပ်ရပ်များကိုရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။ ၄င်းတွင် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများကို အထူးသဖြင့် ၀န်ထမ်းအပြောင်းအရွှေ့အလွန်များသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေများတွင် လျော်ကြေးပေးရမည့် စဉ်းစားချက်ကိုထပ်မံပံ့ပိုးထားပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ Charter4Change အားလက်မှတ်ထိုးထားသော ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် Oxfam နှင့် CARE မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထိုကဲ့သို့ ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများကို လျော်ကြေးပေးနိ်ုင်သည့် စနစ်သစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာရန် ဦးဆောင်သင့်ပါသလား?
၄င်းတို့အတွက် ရုတ်ချည်းဆိုလျင် ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိအဖွဲ့အစည်း၏ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုကိုလည်း အရွှေ့အပြောင်းလုပ်ရနိုင်သည်။ သို့သော် မျှတမှုအတွက် အမှန်တကယ်ကတိက၀တ်ပြုကာ ဆောင်ရွက် လိုလျင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှလည်း စွန့်လွှတ်မှုတစ်ချို့ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
PK Forum မှတ်ချက် - Charter4Change အား လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဖွဲ့အစည်းများသည် “ဒေသစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှရပ်တန့်ရမည် - ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းမှ လူသားခြင်းစာနာထောက်ပံ့မှုဆောင်ရွက်နေသောဝန်ထမ်းအား ဘေးအန္တရာယ်ကြုံပြီးနောက် ၆လအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊ ပဋိပက္ခရေရှည်ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေတွင်း သော်လည်းကောင်း အလုပ်ခန့်သောအခါ မျှတသောလျော်ကြေးတစ်စုံတစ်ခုဖော်ထုတ် ကာပေးသွားမည်။ ဥပမာ - ပထမ၆လစာ၏ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းအား အလုပ်ခန့်ထားခအနေဖြင့် သော်လည်းကောင်းပေးသွားမည်။” ဟု ကတိကဝတ်ပြုထားကျပါသည်။
Photo credited to goal.com Photo caption by PK Forum